समाजवादी पार्टीका सांसदहरुका १५ दिनको तलब बाढीपीडितलाई
जनकपुरधाम, १ साउन । समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश नं. २ का प्रदेश सभा सदस्यहरुले १५ दिनको तलब बाढीपीडितको राहतका लागि उपलब्ध गराउने भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको टोलीद्वारा बाढीपीडित क्षेत्रको निरीक्षण, मुख्यमन्त्रीद्वारा हेलिकप्टर माग
जनकपुरधाम, १ साउन । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको उच्च स्तरीय टोली प्रदेश नं. २ को बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ ।
माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतको टोली आश्वासन दिएर फर्कियो
काठमाडौं, १ असार । मन्त्री र सांसदहरुको टोली बाढी प्रभावित जिल्लाहरुको अनुगमनमा गरेर फर्केको छ ।
आरक्षण बचाऔं आन्दोलन : २ गतेको बन्द फिर्ता, लोकसेवाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने
काठमाडौं, १ साउन । आरक्षण बचाऔं आन्दोलन समितिले घोषणा गरेको २ गतेको नेपाल बन्द फिर्ता लिएको छ ।
पाँच दिनदेखि पालको सहारा, आएन राहत
रौतहट, १ साउन । रौतहट जिल्लाको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ पिपरा भगवानपुरका ७० घर परिवार पाँच दिनदेखि लाल बकैया नदीको बाँधमा त्रिपाल मुनि गुजारा गरिरहेका छन् ।
जनकपुरधाम, १ साउन । प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभामा प्रस्तुत आर्थिक विनियोजन विधेयक २०७६/७७ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
बाटो निर्माण गर्न खनेको खाल्टोमा डुबेर बालकको मृत्यु
रौतहट, १ साउन । रौतहट जिल्लाको कटहरिया नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित जमुनियामा बाटो निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिले खनेको खाल्टोमा जमेको पानीमा डुबेर मंगलबार एक बालकको मृत्यु भएको छ ।
दुर्लभ वन्यजन्तु चित्तलको छाला र मासुसहित पक्राउ
बर्दिया, ३१ असार । बारबर्दिया नगरपालिका १० लम्कीफाँटाबाट सोही ठाउँ बस्ने श्यामलाल थारुलाई दुर्लभ वन्यजन्तु चित्तलको छाला १ थान र १० केजी मासु सहित मंगलबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बाढीपहिरो पीडितहरुको खोज, उद्धार तथा राहतमा १५ हजार नेपाली सेना परिचालन
काठमाडौं, ३१ असार । असार २६ गते साँझबाट परेको अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि नेपाली सेनासँग भएका सबै किसिमका विपद् उद्धारका सामग्रीहरु सहित खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा करिव १५ हजार फौज खट्टिइरहेका छन् ।
सांसद यादव पुगे पीडितको घरदैलोमा
वीरगञ्ज, ३१ असार । हरेक वर्ष प्राकृतिक विपदाको रुपमा बाढीले प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरि त्यसको दीर्घकालीन रुपमा समस्याको सामाधान गर्न पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदिप यादवले विशेष पहल थालेका छन् ।
मधेशी आयोगका अध्यक्षले आफ्नो पाँच दिनको तलब दिने
काठमाडौं, ३१ असार । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा आफ्नो पाँच दिनको तलब दिने घोषणा गरेका छन् ।
नेटवर्किङमा संलग्न ११ जना पक्राउ
कपिलवस्तु, ३१ असार । युनिटि नेटवर्किङंगमा संलग्न ११ जनालाई कपिलवस्तु प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । युनिटि लाइफ नामक संस्थामार्फत नेटवर्किङग ब्यबसाय गरि ठगी गर्नेहरुलाई कपिलवस्तु प्रहरीले पक्राउ गरि मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध काठाडौंमा विशाल जुलुस प्रदर्शन
काठमाडौं, ३१ असार । लोकसेवा आयोगले गरेको असंवैधानिक विज्ञापन खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम लगायत उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरुले विशाल जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरी र नेपाल स्काउट समुदाय–प्रहरी साझेदारी अवधारणा अनुरुप सँगसँगै अगाडि बढ्ने : प्रहरी महानिरीक्षक खनाल
काठमाडौं, ३१ असार । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र नेपाल स्काउट जान मिल्ने क्षेत्रमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
बाढीपीडितका लागि प्रदेश २ मन्त्रीहरुले दिए एक महिनाको तलब, राहत आपूर्तिका लागि समिति गठन
जनकपुरधाम, ३१ असार । केही दिन यताको अविरल वर्षा र बाढीले प्रभावित परिवारको राहतका लागि प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले एक महिनाको तलब दिने भएका छन् ।
राजपानिकट विद्यार्थी संघका अध्यक्षमाथि हातपात
काठमाडौं, ३० असार । काठमाडौंको सातोबाटोस्थित कसमस कलेजमा अध्ययनरत् राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालनिकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्षमाथि हातपात प्रयास भएको छ ।
कांग्रेसका सांसदहरुले पाँच दिनको तलब दिने
काठमाडौं, ३० असार । बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडितहरुको राहतका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पाँच दिनको तलब दिने भएका छन् ।
बाढी र पहिरोपीडितहरुलाई अविलम्ब राहतको व्यवस्था गर्न ठाकुरको माग
काठमाडौं, ३० असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले विगत केही दिन देखिको वर्षा र यसका कारण आएको वाढी, पहिरो र डुबानका कारण पीडितहरुका लागि अविलम्ब राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बाढीपीतिहरुलाई सांसद यादवले एक महिनाको तलब दिने
वीरगन्ज, ३० असार । बाढीपीडितहरुको सहयोगका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रदीप यादवले गरेका छन् ।
रौतहट, ३० असार । गौर नगरपालिकाले बाढीमा डुबेर मृत्यु भएका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर नेपालमा : प्रम ओली
काठमाडौं, ३० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर परेको बताएका छन् ।
बाढी, पहिरो र डुबानमा परी ६७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, ३० असार । अविरल वर्षाको कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी सोमबार दिउँसोसम्म ६७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
भारतमा पनि मनाइयो भानु जयन्ती
काठमाडौं, २९ असार । भारतका नेपालीभाषी भारतीयहरुले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती मनाएका छन् ।
त्रियुगा नदीमा आएको बाढीले फत्तेपुरका २ सय ५० परिवार घरवारविहीन
फत्तेपुर, २९ असार । अविरल वर्षाका कारण फत्तेपुरसहित सप्तकोशी नगरपालीकाको ६, ७, १, २, र ३ का ६ सय घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने पानी पस्दा खाद्यान्नसहित जनधनको क्षति पुर्याइएको छ ।
कटहरिया नगरपालिकामा दुई सय घर क्षतिग्रस्त
रौतहट, २९ असार । रौतहट जिल्लाको कटहरिया नगरपालिकामा २ सय घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।